Banyere M - Dr. Adem
Na-agwọ Ọrịa Gị
Gịnị kpatara okike oncology a na-ejikarị daa?
Mmemme Ọrịa Cancer Dr.
Mmemme Maka mmadụ niile
Nweta Ndụmọdụ Gị n’efu
Ndị ọzọ Services
Ọzụzụ Ọrịa cancer
Ezigbo Ọrịa Ọrịa Cancer
Specialization: Oncology mmekọrịta
Ahụmahụ: N'ime afọ 18
Nzere mahadum: Mahadum Ahụike nke Lübeck, Germany
PhD: Ọbara mgbakwunye mpaghara na mmelite Chemotherapies
Pịa ebe a iji kpọtụrụ m
Dr. Adem bụ dibịa ama ama ama na German na ngalaba nke ọgwụ cancer ndị ọzọ sitere na sayensị. Ruo ọtụtụ afọ, o nyefeela oge ya na akụrụngwa iji melite ọgwụgwọ ọdịnala na ịrụ ọrụ na usoro ndị ọzọ.
N'afọ 2001, o bipụtara akwụkwọ mmụta gbasara doctoral gbasara hyperthermia mpaghara. Ọrụ sayensị ya na mpaghara a, itinye n'ọrụ ya na ọgwụ ndị ọzọ na-alụ ọgụ kansa hụrụ nnukwu mmasị. Nke kachasị, ọ nwere ike gosipụta na, site na nsonaazụ mmekọrịta, enwere ike belata ọgwụ nke chemotherapy na-enweghị ibelata arụmọrụ ya.
N'afọ 2009, mgbe ọ gbara naanị afọ iri atọ na atọ, a họpụtara ya ka ọ bụrụ Onye Ọkachamara Isi na -lọ Ọgwụ Pro-Life, ama ama ama maka nkwado oncology na Innsbruck, Austria.
N'ebe ahụ, ọ gara n'ihu na-eme ọrụ ya na oke ịba ụba ma guzobe ụlọ nyocha ọ na-arụ ọrụ ebe ya na ndị otu ya rụpụtara ụzọ iji chọpụta sel na-ekesa mkpụrụ ndụ kansa.
Ihe ozo diri n’ọrụ ya bu nyocha nke usoro nke itinye ihe okike n’ahu na oncology. N'ime ọtụtụ afọ, ọ wuru ihe ndekọ data kachasị maka ụwa n'ihe banyere ọgwụ cancer.
Ọ zụọla ọtụtụ ndị ọrịa cancer ma ka na-azụ ndị dọkịta si n'akụkụ ụwa niile. Ọtụtụ n’ime ha jizi usoro iwu ya. Usoro ọgbụgba ọbara ya nwere ghọrọ ụkpụrụ n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ.
N'ihi ihe ịga nke ọma na ọgwụgwọ nke ọrịa cancer; ọ kwenyeghi n'ọnọdụ enweghị olileanya.
Mahadum ahụike na Lübeck, Germany
Onye dere akwụkwọ ahụ bụ “Hyperthermic Oncology.”
N'ịga n'ihu na nyocha ya banyere hyperthermia, Dr. Adem dere akwụkwọ ahụ bụ "Hyperthermic Oncology" ebe ọ na-ekerịta ihe nchoputa ya gbasara ike ọbara ọgbụgba na-enye nkwado na usoro ọgwụgwọ ọrịa kansa, yana ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọdịnala dịka rediotherapy na kemotherapy.
E gosipụtara na DVD Dọkụment “Ọrịa Cancer A Nwere Ahụ Ike Ugbu a.”
Dr. Adem bụ akụkụ nke ihe ndị US na-emepụta “Ọrịa cancer bụ C ugbu a”, ihe nkiri DVD a ma ama. Ọ bụ akụkụ nke ndepụta nke ndị dọkịta na-ahụ maka ndị dọkịta kwetara inye ajụjụ ọnụ banyere ọgwụgwọ ọgbara ọhụrụ ọrịa kansa. Otu n'ime ha bụ Leigh Erin Connealy MD, Dr. Friedrich Douwes MD, Stanislaw R. Burzynski MD Ph. D, Finn Scott Andersen MD, Dr. Ferre Akbarpour MD, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nke a gosipụtara n'akwụkwọ Lee Euler bụ "German Cancer Breakthrough.", Akwụkwọ ntuziaka kachasị mkpa maka ndị ọrịa kansa US
Dr. Adem gosipụtara na "German Cancer Breakthrough" nke Andrew Scholberg gosipụtara na ya bụ otu n'ime ndị dọkịta ndị ama ama na German. N'akwụkwọ ahụ, Scholberg dere banyere nyocha Dr. Dr. Adem zuru ezu na ụzọ o si sayensị gosipụta nkwado ọgwụ:
“Dr. Günes họọrọ ndị ọrịa cancer iri kacha elu ma nyocha ihe amaara banyere ọrịa ndị ahụ. O wekọbara ihe mmụta sitere na gburugburu ụwa iji chọpụta usoro ọgwụgwọ herbal ma ọ bụ nke nkwado na-arụ ọrụ na nke ndị anaghị arụ ọrụ. Ọ gụrụ ihe dị ka ọmụmụ 20 na cancer cancer ara. Dabere na nyocha ahụ, ọ chọpụtala ọgwụ herbal dị irè megide ọrịa cancer akpa ume. Ọ chọpụtala ihe ndị a na mkpụrụ ndụ cancer n'ụlọ nyocha ụlọ ọgwụ ma chọpụta na ha gburu mkpụrụ ndụ kansa ahụ. ”
"Ọ bụrụ na enwere nwoke maara ihe ọfụma karịa ọgwụ Dr. Günes, ọ ga-amasị m izute ya. Ọ bụ otu n'ime ndị dọkịta kacha mara amara na German m zutere."
Andrew Scholberg, Onye edemede nke akwụkwọ "German Cancer Breakthrough"
Onye edemede banyere ọtụtụ akwụkwọ ahụike metụtara ọrịa kansa
Vitamin C - Ntinye di nkpa na ọgwụgwọ cancer
Ime ka ahụ sie ike - Akụkụ dị mkpa nke ọgwụgwọ kansa
Caffeine na mgbochi nke kansa
Garlic - Nnukwu onye na - ahụ maka ọrịa kansa
Melatonin na ọgwụ cancer
Resveratrol - Ihe mgbakwunye na ọgwụgwọ kansa
Vitamin D3 na ntinye ya na ọgwụgwọ cancer
Lycopene na ọrụ ya na mgbochi ọrịa kansa
Curcumin na ọrụ ya na ọgwụgwọ cancer
Ketogenic nri ya na ọgụ ọgụ mmetụta ya
Quercetin - Ihe dị mkpa iji gwọọ mkpụrụ ndụ cancer
Vitamin B6 - Nnukwu mgbakwunye na ọgwụgwọ kansa
Vitamin A - vitamin dị mkpa na ọgwụgwọ ọrịa kansa
Vitamin E na enyemaka ya n’imeso kansa
Hyperthermia - Ọgwụ cancer na-apụta
Black cumin - Usoro ọgwụgwọ ọrịa kansa dị irè
Immunotherapy na ọrụ ọ na - ekere na ọgwụgwọ kansa
Metformin - Otu ọgwụ ọgwụ mgbochi ọrịa si enyere oncology
Ikwu ma obu Ozi *
Gbalịa ọrịa cancer gị
Gịnị Mere Oncology On Onwe Ọrịa Na-adịghị Ewu Mgbe Mgbe?
Ezigbo akuko gbasara eziokwu